Mfe iji rụọ ọrụ, nchekwa ma nwee ntụkwasị obi
■ Ike mgbochi corrosion ike, ogologo ọrụ ndụ
•N'aga n'ihu ụkpụrụ mgbanwe okpomọkụ na ikike nke ụlọ.
•Ihe owuwu: Odi na Galvanized, SS 304, SS 316, SS 316L.
•Obere aka oru, nnukwu oku oku
•Advanced Technology Technology Control iji napụta arụmọrụ dị elu na Sachekwa ya
Pọrụ mmiri nke Ọrụ: Compact Skid based Packaged System na-anapụta arụmọrụ dị elu, nchekwa ike, nchekwa nchekwa maka ndị ahịa. Usoro Amụma ala Amọnị pụtara obere ihe egwu, obere ndozi yana ọnụ ala arụmọrụ.
Ahịa kwesịrị inye naanị Mmiri, Eletrik na ụfọdụ obere njikọ piping iji nweta usoro na-arụ ọrụ. Usoro All-In-One pụtara mbelata ego njem na ụgwọ ọrụ nrụnye nke nrụnye.
Ọ na-emekwa ka sistemu dị ọcha, belata ịda ala na mmezi. Nhazi skid pụtara mgbanwe na njikọ mmiri / ọkụ eletrik nwere ike ịdị n'akụkụ aka ekpe ma ọ bụ aka nri nke igwe. A na - ewepụ nsogbu niile nke saịtị ahụ na ntinye, ntinye na njikwa ihe.
•Metro •Industrylọ Ọrụ Chemical
•Ebe nchekwa data •Osisi Ice
•Azụ •Ebe obibi biya
Nke gara aga: Evaporative Condenser - Counter Flow
Igwe Ntughari Na Condenser Na Sistem Refrigeration